On 1/7/2018 (IST)
Sidaan hore idinku qeexay ABDI OOG wuxuu UNFRIEND Facbeook iga dhigay waqti aad u fog oo aan dhihi karo waxaa laga joogaa dhow sano,waxaa is weydiin leh muxuu UNFRIEND kaaga dhigay? jawaabta waa sawirka hoose oo aan soo geliyay bartayda aan ku leeyahay Facebook.
Sidaa awgeed maba isku aragno Facebook,sheekada iminka cirka isku shareertay waxay bilaabatay 2dii Janaayo 2018, xili uu IBRAHIM BAAFO soo qeybiyay ama SHARE gareeyay VIDEO isaga iyo ABDI OOG /ABUKAR AWALE ay isaga duubeen XAMAR iyagoo daba ordaya GAARI QAAD ka buuxo.
Qoraalkeyga iyo Videowga wuxuu ahaa sida aad dusha ku aragtaan "BAAFO IYO ABUUKAR CAWAALE MAXAA KA QALDAN?" MACBUUDKOOW!, dad aad u farabadan ayaa COMMENTS ka bixiyay oo ay ka mid ahayd FANAANADA AMINA SINDACO oo isla COMMENTIGII ay bixisay uu ugu jawaabay ABDI OOG/ ABUKAR AWALE.
ABDI OOG/ABUKAR AWALE sidaad sawirka dusha ku aragtaan wuxuu 3 JANAAYO 2018 15:22 SOMALI TIME uu bixiyay COMMENT CUNSURI iyo AF-LAGAADA ah oo uu ku caynayo xaaska ABDINASIR ISMAIL.
Shabakada solaportal.com oo ah mid aan ku qoro INVESTIGATION nooc walba ah waxaan ka qoray faalo aad u dheer oo aan ku baaray taariikhda ABDI OOG! taariikhda iyo waqtiga si fiican u eega.
Baaritaanka aan ku sameeyay ABUKAR iyo QORAALKA AF-LAAGADADA uu soo qoray waxay kala dhaceen:
AF-LAGAADADIISA 3 Janaayo 2018 15:22 Somalia Time, qoraalka SolaPortal 3 Janaayo 2018 20:20 UK Time, xusuuso Somali iyo UK xiligaan waxaa u dhexeeya 3 SAAC.
Qoraalka SolaPortal oo aad ka eegi kartaan HALKAN. waxaad ka dhex eegtaan CAAY ama AF-LAGAADO loo geystay ABDI OOG.
Ka dib waxaa arinta soo dhex galay shaqsi labadeenaba saaxiib nala ah oo rabay in uu xaalka dejiyo, FACEBUUGIISA ayuu sawirka hoose soo dhigay, waad aragtaan jawaabaha uu ka helay ABDI OOG.
Bal qoraalkii SolaPortal ku laabto oo ka soo saara meel ay ku qoran tahay CAAY loo geystay ABDI OOG/ABUKAR AWALE!
Ka dib waxaa ku xigay CODKII aad wada dhegaysateen ee FACEBOOK aan soo dhigay oo sida sawirka hoose aad ku aragtaan uu iigu soo dubbay FACEBOOK MESSENGER KHAMIIS 4.1.2018 : 17:34.
Ka dib VIDEOWGII uu is lahaa ABDINASIR ku biiqso markii aan reer FACEBOOK u soo bandhigay, xaalkii ayaa ku adkaaday oo wuxuu soo qoray GOODIN iyo GACMAHAAN ka hadlayaa.
ABDI OOG/ABUKAR AWALE wuxuu AF-LAGAADO aad u foolxun kula kacay QOYSKEYGA kaasoo isugu jira CUNSURINIMO iyo isagoo qoyskeyga ku tilmaamay in aan MUSLIM ahayn, waxaan idin xaqiijinayaa kuwa waaweeyn iska daayee saqiirka 6 da sano jira INTA UU TUKADAY ama MASAAJID uu tagay aanu ABDI OOG tegin.
Su'aasha kale waa MA COD BAAN KA DUUBAY? MAYA, sharciga UK si fiican ban u aqaan, laakiin nasiib wanaag isagaa ii soo duubay, sababta aan usoo dhigey FACBOOKNA waa in umadda ay arkaan shaqsigan dhaqankan SOMALIDA aan lagu aqoon la soo baxay.
Hadalka uu ii soo duubay iyo qoraalkiisa dusha si fiican u eeg, wuxuu isku dayey in dadka uu ka dhaadhiciyo in ABDINASIR uu af-lagaadeeyay XAASKIISA, weligay DUMAR iska daayee RAG xitaa ma af-lagaadeeyn, cidii haysa cadeyn fadlan soo dhiga barteyda FACEBOOK.
Xaalkii marka uu ku xumaaday wuxuu isku dayey in uu SUUQA soo geliyo, ABDINASIR baa dad igu soo diray oo waa la ii GOODIYAY, ma ogeyn in QAAD WALAYAASHA Muqdisho ay ii shaqeeyaan.
Ka dib ABDI OOG/ABUKAR AWALE cadaadis xoog leh ayaa meel walba kala soo dirsay UK ilaa iyo SOMALIYA,iyadoo anigana la iga codsaday in aan arinta dejiyo.
Aniga codsigeyga waxaan iri waxaan GARTA saaartay dhamaan Somali weyn, hadii aan qalad galay waxaan balan qaaday in aan FACEBOOK LIVE ah ku RAALI GELIYO,laakiin markii uu ogaaday in xaalku uu ku xun yahay ayuu wuxuu bartiisa FACEBOOK soo dhigay qoraal uu islahaa waa RAALI GELIN, laakiin ah ah mid QIIQ isku qaris ah.
Tan waa dhereg dhacsi, ninka raga ah hadii uu qalad galo waa in uu RAALI GELIN 100% aan geed loogu soo gaban uu bixiyaa, laakiin HEBEL WAAN CAFIYEY iyo REER MUDUG baan ahay waa JEES-JEES iyo dhereg dhacsi.
Aniga ABDINASIR ahaan sidaan hore u sheegay hadii la iga gar helo waxaan diyaar u ahay in 100% RAALI GELIN VIDEO ah aan duubo, laakiin CADAADIS weligay kuman shaqeyn mana dheceyso in arinaan ay halkan ku dhamaato.
Ugu dambeyn maxaa ii banaan? wadanka UK oo aan ku wada nool nahay sharci baa lagu kala baxaa, ma jirto GACAN KA HADAL iyo AK47 laysku tuuro, aniga qorshaheyga dhanka sharciga oo hore aan u sheegay waa ii diyaarsan yahay, hadii ay ahaan lahayd JAAMACADIHII lacagta deeynta ahayd laga qaatay oo aan la dhigan, shaqooyinka been abuurka iyo lacagaha dowlada aan loo sheegin, sidaa awgeed RAGU haday is baranayaan.
ABDI OOG qoyskiisa waxba igama galabsan, lagamana yaabo qoys arimahooda in aan galo, laakiin waxaa igu balan ah in mar dambe aanu qof kale qoyskiisa ku af lagaadeeyn SOCIAL MEDIYAHA.
Dhamaan asxaabta aqrisay qoraalkan idinkaa GARSOORKA la idiin dhiibay, aniga weli albaabkeyga waa furan yahay, hadii uu RAALI GELIN 100% bixiyo sheekada halkan ayay ku dhameenysaa, hadii kale xaalku waa BARIGA DHEXE.